IATA Bhodhi reMagavhuna mazita ePegasus Airlines CEO Sachigaro mutsva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » IATA Bhodhi reMagavhuna mazita ePegasus Airlines CEO Sachigaro mutsva
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Turkey Kuputsa Nhau
Mehmet T. Nane, CEO wePegasus Airlines anova Sachigaro mutsva weIATA's Board of Governors muna Chikumi 2022.
Mehmet T. Nane achashanda seye wekutanga weTurkey Sachigaro weIATA Bhodhi reMagavhuna.
Mehmet T. Nane achatsiva iye iyezvino Sachigaro weBhodi reMagavhuna Robin Hayes.
Mehmet T. Nane achashanda kusvika pakupera kweMakumi manomwe neshanu yeGeneral General Assembly muna 79.
Mehmet T. Nane, CEO wePegasus Airlines, akasarudzwa kuva Sachigaro we Iată Bhodhi reMagavhuna pa Sangano reInternational Air Transport AssociationMegeth General Assembly yegumi nematanhatu, kuti atange basa rake muna Chikumi 77. Mehmet T. Nane, anozoshanda sachigaro wekutanga weTurkey weIATA Board of Magavhuna, achatanga nguva yake ku2022th General Assembly ichaitirwa muShanghai. pana 78-19 Chikumi 21, achitsiva iyezvino Sachigaro weBhodi reMagavhuna Robin Hayes. Mehmet T. Nane achashanda kusvika pakupera kweMakumi manomwe neshanu yeGeneral General Assembly muna 2022.
Nekugadzwa uku, Mehmet T. Nane ichave zvakare nhengo yeIATA's Sachigaro Komiti uye iyi Sachigaro Wenhengo Dare rinozogara makore matatu saakasarudzwa, anoshanda uye aimbova Sachigaro weBhodi reMagavhuna.
Achitaura nezve kugadzwa kwake, Mehmet T. Nane akati: “Ndinodada nekutora basa rakakosha kudai. Ichi zvakare chiratidzo chakakura chekusvika kwendege yeTurkey kusvika… ”uye akaenderera mberi achiti:“ Indasitiri yendege, iyo inosimudzira mamwe matunhu kuwedzera mukuita kwayo kwakakosha basa, iri kupfuura nenguva yakaoma kwazvo munhoroondo yayo. Sezvo Iată, iyo nhasi inomiririra 82 muzana yemafambiro emhepo, akaenzana nenhengo dzendege mazana maviri nemakumi maviri nenomwe dzinobva kunyika zana nemakumi maviri, basa rakakura riri pamberi pedu nderekushanda kuitira kuti maindasitiri edu, anova ndiwo anotyaira hupfumi hwenyika, adzokere kumatunhu epamberi nekukurumidza sezvazvinogona uye ichienderera nekukura kwayo kwakasimba. Ini ndichashanda ndisinganete kune izvi zvinangwa. Tichakunda nguva dzakaoma idzi nekubatanidza mauto edu pamwechete ”.
Pegasus Airlines 'CEO, Mehmet T. Nane, uyo akashanda saSachigaro weIATA's Audit Committee munguva yapfuura, anoramba ari nhengo yeIATA Board of Magavhuna kubvira paakadomwa mu2019.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) Mubatanidzwa wevatengesi vemapepanhau epasi rose akavambwa muna 1945. Inosanganisira muna2016 yendege mazana maviri nemakumi mapfumbamwe, kunyanya vatakuri vakuru, vanomiririra nyika zana negumi nenomwe, inhengo dzendege dzeIATA dzinotakura angangosvika makumi masere nemasere ezviuru emazana emakiromita anowanikwa. IATA inotsigira chiitiko chendege uye inobatsira kugadzira indasitiri mutemo uye zviyero. Inotungamirwa muCanada muguta reMontréal, ine mahofisi makuru kuGeneva, Switzerland.
Pegasus Airlines ndeyeTurkey yakachipa-inodhura inotakura inotungamirwa munzvimbo yeKurtköy yePendik, Istanbul ine mabhesi munzvimbo dzinoverengeka dzeTurkey.